#LAND - Koorsada Google Earth - laga bilaabo xoqista - Geofumadas
Noqo khabiir Google Earth Pro oo run ah oo ka faa'iidayso xaqiiqda ah in barnaamijkan uu hadda yahay gratuito.
Shakhsiyaadka, aqoonyahannada, macallimiinta, aqoonyahannada, ardayda, iwm. Qof walbaa wuu isticmaali karaa softiweer kumbuyuutareedkan oo u adeegsan karaa barta ku habboon
Google Earth waa kombiyuutar u oggolaanaya daawashada aragtida dayax-gacmeedka, laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo 'Muuqaalka wadada', Dhulkeenna Dunida. Hadda nooca Pro gabi ahaanba bilaash wuxuuna u oggolaanayaa marin u helidda dhammaan astaamaha horumarsan.
Haddii aad tahay a gaar ah inaad kaliya rabto inaad 'safarto' adduunka oo dhan, sida haddii aad tahay a profesional in aad u isticmaali doonto in aad ku meelayso macluumaadka oo aad ku abuurto khariidado, koorsadan waxay noqon doontaa mid waxtar leh.
Barnaamijkan sidoo kale waa qalab xiiso u leh adduunka waxbarasho, maadaama ay suurtagal tahay in lagu dhammaystiro maaddooyinka howlo la xiriira Google Earth (tusaale ahaan eeg qaabdhismeedka juqraafiyeed, samee juquraafiga, taariikhda, iwm.)
Koorsada waxaa lagu qaabeeyey Qeybaha 4:
Horudhac: Waxay baran doonaan sida loo raadsado meelaha, la galaan iskuduwaha iyo maaraynta qeybaha kala geddisan ee barnaamijka Google Earth Pro.
Ku dar macluumaad: Waxaad baran doontaa sidaad iskugu dari lahayd calaamadaha bartilmaameedka, xariijimaha iyo polygons. Ku dhejiso macluumaadka qaabab kala duwan iyo ka soo dhoweynta xogta GPS.
Dhoofinta macluumaadka: Waxaad baran doontaa sida loo abaabulo lakabyadaaga oo aad u abuuri lahayd faylalka kmz. Waad dhoofin doontaa sawirro waxaadna abuuri doontaa safarro.
Fursadaha horumarsan: Waxaad baran doontaa sida loo isticmaalo mastarka iyo xisaabinta aagagga iyo cabbirkasta. Waxaad ku dari doontaa sawirro waxaadna ogaan doontaa taariikhda sawirrada.
Qayb kasta waxaa weheliya taxane ah layliyo iyo su'aalaha lagu tababbaro fikradaha la arkay, iyo sidoo kale dukumiinti ku jira PDF la soo dejin karo
U maaree Google Earth khabiir ahaan.
Abuur astaanno, xariijin iyo polygons.
Ka soo dhowo macluumaadka nidaamyada kale ee macluumaadka juquraafiyeed.
Dhoofinta sawirrada xalka sare.
Abuur oo dalxiis loo dhoofiyo.
Dulsaar sawirada oo fiiri taariikhda muuqaalka
Waxaad ubaahantahay barnaamijka Google Earth Pro.
Heerka aasaasiga ah ee kombiyuutarada iyo isticmaalka jiirka ayaa ku filan.
Qof kasta oo raba inuu ogaado meelaha cusub ee meeraha.
Macallimiinta doonaya inay hirgeliyaan hab cusub oo wax lagu baro. Barista juqraafi ahaan waxay u muuqataa wax muuqda, laakiin sidoo kale waxaad kuqaban kartaa nashaadaadyo fasal taariikhi ah tusaale ahaan, barashada dhismayaasha Masar.
Xirfad-yaqaanno ka socda goob kasta oo u baahan curinta macluumaad joqoraafiyeed iyada oo aan laga adkaanin adeegsiga Nidaamka Macluumaadka Juquraafiga.
Post Previous«Previous #GIS - Koorso Modeling iyo koorsada falanqaynta daadadka - iyadoo la adeegsanayo HEC-RAS iyo ArcGIS
Post Next #LAND - Koorso Madaniga ah 3D loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 1Next »